Inona avy ireo fahafahana tonga lafatra mba hampitomboana ravinkazo?
Ny fananganana rohy dia singa manan-danja amin'ny fampielezan-kevitra fanentanana satria ny rohy ivelany dia mitondra ny fifamoivoizana sy ny fidiram-bola amin'ny tranonkala iray ary hampitombo ny fahefany eo imason'ny fiara fitadiavana. Backlinks dia toy ny safidin'ny orinasa an-tserasera, ary raha avy amin'ny loharanom-baovaon'olon-tsotra izy ireo dia lasa mahery kokoa ary manome valiny fanampiny. Ny billery dia afaka mampitombo ny pejy manam-pahefana anao sy ny fahamendrehanao mba hahafahanao miseho amin'ny TOP OF SERP amin'ny teny fikarohana.
Na izany aza, amin'ny tontolo tena izy, tsy ny rindran-damina rehetra ihany no noforonina. Izany no mahatonga ireo tompon-tranonkala maro manontany tena hoe ahoana no hampitombo ny isan'ireo rindran-damba tsara amin'ny tranokalany. Ny birao azo avy amin'ny tranonkala azo itokisana ary manodidina ny votoatin-javatra ilaina amin'ny fikarohana dia mety hitondra fampivoarana maharitra izay mitombo amin'ny raharaham-barotra. Rehefa mampivelatra ny fanentanana fananganana rohy ianao, dia tokony hahafantatra ireo fomba ilainao hisorohana ny fisian'ny sazy Google sy ny fialan-tsasatry ny habaka.
Alohan'ny hanandramanao hanatontosana ny fotoana ahafahana manangana backlinks ho an'ny tranonkalanao, dia mila mandingana ny Google Webmaster Guidelines izay manazava Ho anao izay avo lenta avo lenta ary mampifandray ny fomba fanaovan-tsoa izay tsy ilaina ampidirina amin'ny fanentanana fanentanana. Google dia manoro hevitra mafy mba hisorohana ny rohy ivelany sy ny habaka ivelany. Mba hanasaziana ireo tsy manaraka ireo torolalana ireo, dia namorona vaovao malaza nataon'i Penguin i Google fa ireo tranonkala nipoitra izay nandray anjara tamin'ny hetsika fananganana hosoka.
Ireto manaraka ireto ny teknikan'ny fanamboarana spammy manaraka:
ny tsy fisian'ny votoaty orinasa na kely vitsy;
ny rohy dia miafina ao anaty lahatsoratra iray, toy ny lahatsoratra amin'ny haben'ireo endri-tsoratra 0;
fametahana na famitahana fitaovana sy mpampiasa.
Manoro hevitra mafy anao aho mba hialana amin'ireo fombafomba mampidi-doza ireo ary tsy miara-miasa amin'ireo loharanom-baovao izay manatanteraka azy ireo mba hisoroka rohy izay lazaina ho spam.
Hanamafisina ny rindran-tsavily
Mba hampitomboana ny kalitaon'ny profil backlinks, dia tsy afaka manamaivana ny herin'ny fitaovana Google Disavow. Manakana anao tsy hifanerasera amin'ny tranokalan'ny antoko spammy ny famerenana ny backlinks momba ny kalitao. Ny rindran-damba mahatsiravina izay manondro ny tranokalanao dia mety miseho amin'ny toe-javatra samihafa. Indraindray ny rotsak'i spammy dia mety hipoitra noho ny hetsiky ny mpifanandrina amin'ny tranokalanao. Ankoatra izany, mitranga ihany koa rehefa tsy misy intsony ny rindran-damba taloha noho ny tranokalam-panarenana. Google dia manazava ny fomba handavana ny rindran-damina, ka tsy manisy fiantraikany amin'ny lalao. Raha vao fantatrao hoe tokony havaozina ny backlinks, mila mamorona rakitra miaraka amin'ilay lisitra ianao ary alefaso any amin'ny Google Webmaster Tool.
Ankehitriny, fantatrao hoe inona avy ny backlinks mila misoroka sy ny fomba hanaovana izany amin'ny fanampian'i Google, noho izany dia azonao atao ny mianatra teknika mety amin'ny fanatsarana ny lozam-pifaneraserana misy anao ary mamorona bakalorea ambony kokoa amin'ny toerana ivelany.
Ahoana ny fampitomboana ny isan'ny bakolava tsara?
Fidiram-pahaizana amin'ny votoatin'ny tranonkala
Aza mijanona amin'ny famolavolana hevitra vaovao ho an'ny votoaty satria misy foana ny fahafahana afaka manampy anao Betsaka ny backlinks vaovao. Mila mahita ny votoatin'ny votoaty ao amin'ny tranokalanao ianao ary mahatsapa mandrakariva ilay vaovao. Misy safidy sasantsasany hanaovana fikarohana amin'ny votoaty ao amin'ny vohikala izay mety ho be lavitra noho ny fanaovana fanaraha-maso ny tranokala iray manontolo izay ampiasanao fitaovana fanadiovana fikarohana mba hizarana ny URL-nao rehetra na hijerena ireo sokajy votoaty mba hijerena izay mbola tsy noteneninao.
Mba hahitana fahafaha-miditra vaovao dia afaka mampiasa fitaovana fikarohana momba ny fikarohana ianao. Manoro hevitra ny fampiasana Moz Pro aho ary Semalt Auto SEO . Amin'ny fampiasana ireo fitaovana ireo dia azonao atao ny mandrefy ny filaharana amin'ny pejy manokana izay manana teny fototra sy ny volan'ny fikarohana isam-bolana.
Raha vao nahita ny mombamomba anao ianao dia azonao atao ny manomboka mikaroka ireo teny manan-danja mifandraika amin'izany. Ny teny fanalahidy vaovao manan-danja dia hanome anao fahafahana hamorona votoaty vaovao ho an'ny tranokalanao. Ataovy azo antoka fa ny teny fanalahidy izay nofantenanao dia tena manan-danja tokoa amin'ny tsenanao ary manana volavolan-drakitra avo lenta (farafahakeliny 1000 isam-bolana). Na izany aza, ireo teny fikarohana ireo dia tsy tokony hifaninana loatra satria tsy ho afaka hampiasa azy ireo ianao ho tombontsoanao.
Mitadiava tranonkala manana laza
Mba hampitombo ny herin'ny rindran-kira, mila mikaroka tranokala manana fahefana ianao ao anaty fonosanao. Ireo tranonkala ireo dia tsy tokony ho mpifaninana mivantana amin'ny orinasanao an-tserasera, fa farafaharatsiny mifandray amin'ny orinasanao. Ireo rindran-damina toy izany dia afaka manampy anao hisintona ireo mpanjifa mety, hanangana PageRank ary hanatsara ny fanentanana ny marikao. Azonao atao ny manamarina ny lazain'ny besinimaro, ny laharana, ny mpitsidika sy ny mpitsidika hafa amin'ny fampiasana Semalt Website Analyzer . Ilainao ny mandinika manokana ny mombamomba ireo sehatra manan-danja izay maneho raha toa ka ilaina ny tranokala ho fampitomboana ny rindranasa sy ny lahatsoratry ny pejy na tsia.
Mila manisy fiheverana manokana amin'ny tranonkala toy izany ianao:
isan-jato amin'ireo mpitsidika tonga amin'ny tranokala avy amin'ny faritra samihafa;
fanangonana metrika fototra - fialan-tsasatra, mpampiasa fotoana mandalo eo amin'ny tranokala, andrana pejy isan'andro, ary ny hafa);
Ampidiro amin'ny fifamoivoizana sy ny fifamoivoizana fikarohana;
teny fanalahidy ambony indrindra amin'ny fikarohana.
Ireo fitomboana ireo dia hampitsahatra ny fikarohanao, hanome anao ny lisitr'ireo tranonkala mahasoa indrindra izay manana fiantraikany goavana amin'ny famoronana sy fihazonana backlinks ho an'ny tranokalanao.
Fidio ny hevitra ao amin'ny lahatsoratra
Ankehitriny, rehefa nahazo lisitr'ireo loharanom-baovao mahasoa indrindra ianao, ny rohy mankany aminy amin'ny alàlan'ny fanomezana votoaty mampientanentana sy fikarohana. Ny tanjona voalohany amin'ny fananana ny votoatinao hita amin'ireo tranonkala hafa malaza dia ny manatsara ny mombamomba ny marika ary maneho izany amin'ny mpihaino vaovao.
Raha manapa-kevitra ny handefa ny votoatin'ny tranonkala fifaneraserana amin'ny rindrankajy hafa ianao, dia ataovy antoka fa mifanaraka amin'ny toro-làlana andrandrahana ny fitaterana ary mifanaraka amin'ny zavatra ilainao. Azonao atao ny mametraka hevitra hafa momba ny votoatin'ny tranonkala hafa na mandefa hafatra vahiny.
Noho izany, raha hamoaka ny votoatiny mifototra amin'ny fikarohana miaraka amin'ny rohy manan-danja eo amin'ny sehatra misy anao ianao, dia hampitombo ny fifamoivoizana eo amin'ny tranokalanao ianao ary hampitombo ny lazanao ho mpitarika eo amin'ny mpiara-belona anao, izay afaka miova fo ny fitarainanao Source .